Qoraalka Jerry: Kani waa maqaal hore oo daabacday Luana bishii 2015. gada septembris; waa la cusbooneysiiyay dhowr jeer ilaa markaa. Fikradayda, inta badan qodobbada iyo taatikada qodobbada lagu wadaago ee maqaalkan weli waa kuwo quseeya oo ansax ah maanta.
Qiimaha magaca domain waa kor u kaca.
Ug, saks? Verisign ayaa kor u qaaday qiimaha .NET mar kale Janaayo 2015, ka dib markii ay horay u sameysay Janaayo 2014. TLDs cusub ayaa ka miglas raqiis, sidoo kale, dhawr ka reeban.
Ka waran dhaqaalaha adduunka? Meel kastoo aad ku nooshahay, xiisadda ayaa wali jirta laga bilaabo 2015. gada jūlijs, si lacagta loogu hayo xaaladaha degdegga ah waa muhiim. Meelaha gaadiidka ee dheeraadka ah, ee aan la isticmaalin, ama yareynin waxay dabeyli karaan cunto cunidda aad ku badbaadin karto kharashka nolosha.
Haddii aad, aniga oo kale, aniga oo idil, dhowr boodhooyin ku saabsan meeli ka duwan, waxaad ubaahan kartaa u tag xulashooyinka ka jaban ama bilaashka ah ama dib looga fiirsado tirada domains aad adigu leedahay, laga yaabee adoo goo ogtahay, adeegyadaas iyo domains-yadaas oo aan keenin ROI joogto ah ama weligood helin gaadiid ku filan.
Si fudud loo yiraahdo way ka badan tahay, waxaad ku doodi kartaa.
Adigu waxaad ku xidhan tahay qaar ka mid ah shabakadahaaga oo weligaa uma oggolaan doontid inay sii daayaan. Meelaha kale qaarkood ee aad adigu leedahay ayaa laga yaabaa inaysan wax ujeeddo ah hadda lahayn, iyadoo aad wali maskaxda ku hayso oo aad u qorsheynayso iyaga, laakiin runtii waad u adeegsan doontaa goor dambe.
Sidoo kale, waxaa laga yaabaa inaad leedahay lahjado kale oo aad ogtahay inaad isticmaali doonto sanadaha soo socda, laakiin hadda ma haysatid wakhti iyaga ah sidaa darteed ma ahan mudnaanta.
Tani waa vasks wanaagsan. Halkāna dhowr jeer; sameen, sidoo kale.
Ja kastaba ha noqotee, marka qiimaha TLD ir kori qaadaan iyo arrimaha maalyadeed u yeeraan isbeddel, waxaad u baahan tahay inaad u diyaargarowdo isbeddelkaas, iyo inaad u tagto sidii xanaaq badan intii suurogal ah.
Uma baahnid inaad ka takhalusto bogaggaaga-ROI-ga isla markiiba. Marka hore sahamiyaan fursadaha; Sii daynta ayaa runtii ah meeshaadii ugu dambaysay.
Doorashooyinka aan ku šeit karo waa hab wanaagsan oo lagu bilaabi karo qorshahaaga deg-degga ah ee deg-degga ah.
1 Magaca Magaca Miisaaniyadda iyo Qorsheynta
1.1 1. Isbarbardhig diiwaan-galiyayaasha
1.2 2. Isku-darka (ama laga yaabee maya?)
1.3 3. Si joogto ah ula soco ROI
Magaca Magaca Miisaaniyadda iyo Qorsheynta
1. Isbarbardhig diiwaan-galiyayaasha
Halkee ayaa ka jaban iibso oo cusboonaysii žurnāla domēns?
NameCheap waxay ku kacdaa qiimo dhimis khaas ah domēna cusub iyo ajuurada dib u cusboonaysiinta waqti ka waqti. Haddii miisaaniyaddaada diiwaangelinta iyo dayactirka ir xadidan tahay, labadan diiwaan-geliyeyaashu waxay kuu fududeynayaan in la ilaaliyo domainyadaada sanado badan oo soo socda.
Tixgeli wareejinta haddii diiwaan-haye gaar ah uu kor u qaado qiimahiisa wixii ka baxsan suurtagalnimada miisaaniyaddaada. Tani waxay mararka qaarkood dhacdaa marka biilasha diiwaan-hayaha ay si lama filaan ah ugu koraan sababtuna tahay qiimaha diiwaangelinta oo kor u kaca ama haddii ay arkaan koror ku kacaya dayactirka.
Ilaa intaad karti u leedahay inaad kordhiso miisaaniyad loogu talagalay domains, taladaydu halkan waxay tahay inay bilaabaan raadinta diiwaan-wadeyaal kale sida ugu dakhsaha badan ee suurogalka ah, si aad ugu wareejin kartid aagagaaar.
2. Isku-darka (ama laga yaabee maya?)
Haddii aad awoodi kartid inaad isku-kalsoonidid, samee! Laakiin haddii fikradda ah inaad bixiso boqolaal kun oo kun doolar ah si aad u cusboonaysiiso dhamaanba domiyadaaga ayaa ku cabsi geliya ama ka baxsan miisaaniyaddaada (tusaale ahaan, haddii aad haysato miisaaniyad bil.
Ilaa iyo hadda, isweydaarsigaan ma ahan mid ikhtiyaari ah aniga, sababtoo ah bilihii ugu dambeeyay ee la isku haleyn karo waa – hurdada – bilaha sanadka aan xanuunsado marar badan – sidaas darteed waxaan shaqeeyaaose wax yar, iyo.
Hubi taariikhaha isku-xirnaanta ee la xiriira diiwaan-galiyahaaga oo eeg haddii ay ku habboon yihiin baahiyahaaga. Haddii kāposti, sii wad isku midka ah xulashada ugu dambeysa.
3. Si joogto ah ula soco ROI
Hayso izsekot dakhliga soo saaray magaca domain kasta.
Dhamaadka sanadka (kahor taariikhda cusboonaysiinta), isbarbar dhig dakhliga ku soo gala domainka kana fikir in aad ka takhalusto magacyada domain ee aan abuurin dakhli ku filan ugu yaraan kharashaadka daboolida.
Sidee ula socon kartaa domainsaga ROI?
1. Qiimeeyaan vasks soo saarka / kor u qaadista macaamiisha
Brian Dean ka soo Backlinko.com ayaa u suurtagashay in uu gaaro ROI and aad u sareeya isaga oo u mahadnaqaya "dhiira gelin dheeraad ah, istraatijiyad yar" sida lagu soo bandhigay podcast ee Nišas peļņa. Haddii aad doonaysid inaad qoraal ku qorto mawduuc aad u qoto dheer oo aad blog us taha, tani waa istaraatiijiyad fiican oo la raaco si aad uga dhigto midka ugu badan ee magacaaga domain. Maadooyinka kale ee ROI waxay raaci doonaan habdhaqanka.
2. Si joogto ah u hubi lambarkaaga taraafigga
Toddobaadle ama bille. Ja tu būtu izteicis hayso miis isbarbar dhig oo ka mid ah dhammaan domainsyada oo socodsiiya sannad walba inta ay ku ku galayaan taraafikada soo socota. Waxaad bilaabi kartaa qorsheynta waxa domain-yada aad ka saari kartid adoo fiirinaya jadwalkaan.
3. Sidee domain this loo barbar dhigo maamulka guud ee domain?
Dakhligan micnaheedu ma yahay wax badan oo adiga iyo blogging (ama bogga kale) ama ma waxaad kaliya iibsatay domain ee dib udajinta, ujeedooyinka ama baaritaanka? Ma waxaad u socotaa si aad uhesho meeshan hareeraha ah ama ma waxaad rabtaa inaad isticmaasho laba sano oo dabadeedna tirtirto?
Waxay tagaysaa iyada oo aan sheegin in nooc kasta oo ku meel gaar ah ay tahay inuu bartilmaameedka ugu horreeya ee nadiifinta degdega ah, gaar ahaan maaddaama noocyadani ay ku xiran tahay qiimaha TLD ee sanadkan.
Haddii aad leedahay bogag isticmaal shaqsiyeed oo aadan lacag ka sameysan, iska hubi in bogag kale ir abuuraan dakhli ku filan si loogu daboolo kharashaadka ku xiran domains.
Qoraalka Jerry: Kani waa maqaal hore no dia Luana bishii em setembro de 2015;
Qoraalka Jerry : Kani waa maqaal hore oo ay daabacday Luana bishii 2015 년
Si aad u yeesho degel, waxaad u baahan tahay saddex shay : magac 도메인,
Si aad u yeesho degel, waxaad u baahan tahay saddex shay: magac domain, martigalin
Si aad u yeesho degel、waxaad u baahan tahay saddex shay：magac domain、martigalin web、iyo degel horumaray。